UKirta uthole i-Epic MegaGrants, umnikelo ongu- $ 25 kusuka kuma-Epic Games | Kusuka kuLinux
Imidlalo yama-Epic yahlekisa ngoKhisimusi kubafana bakaKritaYebo, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule (ngaphambi kukaKhisimusi) inkampani Umthuthukisi wegeyimu yevidiyo waseMelika waziwa kakhulu ngomdlalo wakhe we-super star “Fortnite,” unikele ngemali engama-dollar ayizinkulungwane ezingama-25 kuphrojekthi kaKrita.
Konke lokhu kususelwa esinyathelweni ngu-Epic Games ukuhlinzeka ukwesekwa kwezezimali kumaphrojekthi wemithombo evulekile futhi kulokhu bekuyithuba likaKrita, lapho imali enikelwayo izosetshenziswa ngayo ukuthuthukisa umhleli wemidwebo, eyenzelwe abaculi nabakhombisi bezithombe.
Okwalabo abangazi ngeKrita, kufanele bakwazi lokho umhleli usekela ukucutshungulwa kwesendlalelo esiningi, inikeza amathuluzi okusebenza ngamamodeli ahlukahlukene wombala futhi ineqoqo elikhulu lamathuluzi wokudweba kwedijithali, ukudweba nokwakha ukuthungwa.
Lo mnikelo wenziwa njengengxenye yohlelo lwe-Epic MegaGrants.
Kufanele ukukhumbule lokho NgoJulayi wakulo nyaka, ama-Epic Games anikele ngeBlender Foundation ngama- $ 1.2 million ukuze kuthuthukiswe ukuthuthukiswa kwe- "Creative Software Suite Blender"
Lezi zimali ezitholwe eBlender Foundation zizokwabiwa ngezigaba eminyakeni emithathu ezayo. Njengoba kuhlelwe ukusebenzisa imali ukukhulisa abasebenzi bonjiniyela, ukuheha ababambiqhaza abasha, ukuthuthukisa ukuhlanganiswa komsebenzi kuphrojekthi futhi uthuthukise ikhwalithi yekhodi (uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo ngenothi ongakwenza ukuvakasha isixhumanisi esilandelayo).
Enye iphrojekthi umthombo ovulekile abazuze ngalolu hlelo I-Epic MegaGrants kwakuyi-lutris (umphathi wegeyimu we-FOSS okhethekile wamapulatifomu we-Linux). Umnikelo wama-Epic Games futhi ubusezingeni lokuthi bazimisele kakhulu ukuthi i-Epic Games Store isebenze kuLinux ngendlela ezinze kakhulu.
Izimali ezitholakele zizoqhubeka nokwenza ngcono ipulatifomu iyonke, kepha ikakhulukazi ekwakhiweni kwamathuluzi aqinisekisa ukuzinza kwemidlalo noma ama-launcher afakwe kuLutris.
Ngokuqondene nokumenyezelwa ngabafana baseKirta, bavele babelana ngokubonga kwabo ma-Epic Games:
I-Epic, abenzi benjini yomdlalo we-Unreal, basekele uKrita nge- $ 25,000 MegaGrant!
I-Epic isekele amanye amaphrojekthi wesoftware wamahhala, njengeBlender neLutris ngaphambili, futhi manje iyahambisana neKrita. Inhloso yalesi sibonelelo ukuxhasa ukuthuthuka enqubeni yethu yentuthuko ukwenza ukuthuthukiswa kukaKrita kube okusimeme ngokwengeziwe. Lokhu yinto esesivele siyiqalile futhi esifuna ukusheshisa. Ngabasebenzisi abalinganiselwa ezigidini ezinhlanu, kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi singakhipha uhlobo lweKrita oluzinzile ngangokunokwenzeka ngendlela ethembeke kakhulu!
Isimo sezwe ngakuKrita imele ukuxhaswa okungenani kwezinyanga eziyi-10 onjiniyela abazibophezele ngalo ekuthuthukiseni ithuluzi nomsebenzi, kusukela lapho imali izosetshenziselwa ukuthuthukisa uhlobo olulandelayo oluzinzile lweKrita.
Tim Sweeney (umsunguli we-Epic Games) uphonsa indlu ngefasitela kulo nyaka we-2019 ngoba uzwakalise uthando lwakhe nge-software yamahhala Ngendlela engcono kakhulu futhi lokho ngukuthi siyisekele ngeminikelo, sinethemba lokuthi amaphrojekthi amaningi azosekelwa ngehlelo le-Epic MegaGrants nokuthi uKrita angaqhubeka nokuthola lokhu kusekelwa ukuze athuthukise ithuluzi lakhe.
Uphelile lo nyaka futhi unyaka omusha uyeza sithemba izindaba eziningi ezifana nalezi ezivela kumageyimu we-Epic Siyaqhubeka nokumangaza nokujabulisa abasebenzisi abaningi kunethiwekhi kwazise izindaba zomnikelo kuKrita zamukelwe kahle kakhulu ngabasebenzisi nabasebenzisi be-Intanethi kumanethiwekhi omphakathi nasezinkundleni zokuxhumana.
Futhi ucabangani ngakho, iyiphi enye iphrojekthi ye-software yamahhala ocabanga ukuthi kufanele isekelwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » UKirta uthole i-Epic MegaGrants, umnikelo ongu- $ 25 kusuka kuma-Epic Games
Uthando oluningi ngomthombo ovulekile ne-fortnite ye-linux